Aeroflot mulls sidina mankany Mexico, Jordania, Dominikanina ary Maorisy
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Aeroflot mulls sidina mankany Mexico, Jordania, Dominikanina ary Maorisy
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • Vaovao Mafana Jordanie • Vaovao Mafana Maorisy • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Azur Air amin'izao dia misidina any Mexico sy Dominican Republic, raha tsy misy seranam-piaramanidina rosiana manompo ny zotra Jordan sy Maurice.
Natomboka tamin'ny Mey 2021 ny serivisy ho an'ny rivotra any Mexico.
Natomboka tamin'ny volana Aogositra ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Jolay ny serivisy fiaramanidina miaraka amin'i Jordan sy Maurice.
Ilay mpandefa saina Aeroflot ao Rosia dia mety handefa sidina mankany Mexico, Mauritius, Jordania ary ny Repoblika Dominikanina, hoy ny tale jeneralin'ny kaompaniam-pitaterana Mikhail Poluboyarinov tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fantsom-pahitalavitra Rosiana.
Lehiben'ny mpanatanteraka Aeroflot Mikhail Poluboyarinov
“Mikasa ny hanokatra sidina mankany Mexico ihany koa izahay, izay toerana fitsangatsanganana mahaliana tokoa. Izahay dia mikasa sy mieritreritra sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina, ary mihevitra an'i Maorisy sy i Jordania koa, ” Aeroflothoy ny Lehiben'ny mpanatanteraka.
Natomboka tamin'ny Mey 2021 ny serivisy fiaramanidina ho any Mexico, ary ny sidina ihany no nanao izany Azur Air ankehitriny.
Ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina dia natomboka tamin'ny fiandohan'ny volana aogositra, Azur Air ihany koa no mpitatitra misidina any izao.
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny volana Jolay ny serivisy an'habakabaka miaraka amin'i Jordan sy Maurice, na dia tsy misy orinasa rosiana mahavita sidina aza hatreto.